R. Hasimpirenena, filoha nasionalin’ny Mafami : « Tsy misy fandrosoana raha tsy mivondrona sy manambatra hery » | NewsMada
Fihaonambe voalohany amin’ny itantanan’ny filoha nasionaly vaovao, R. Hasimpirenena, ny Mafami ny asabotsy teo. Tratra ny tanjon’ny fikambanana amin’ny fampihavanana sy fampivondronana ho anjara biriky amin’ny fampandrosoana ny firenena. Olona avara-pianarana avokoa rahateo ny mpikambana.
Tontosa ny asabotsy teo teny amin’ny Batou Beach Ambohimanambola ny fihaonambe voalohan’ny fikambanana Mafami, ivondronan’ny mpianatra eny amin’ny ambaratonga ambony sy ireo mpianatra, mpandraharaha, mpiasa maintimolaly. Natao hampihavana sy hampivondrona fa tsy sehatra hanaovana politika ny Mafami. Tratra ny tanjona ankehitriny araka ny teny filamatra hoe: “Mafami, mampivondrona”. Marik’izany izao fanotronan’ny raiamandreny sy tomponandraikitra ambony ity fotoana ity toy ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotomanana Honoré, ny filohan’ny oniversiten’Antananarivo, Ramanoelina Panja sy ireo loholona sy solombavambahoaka. Eo koa ireo mpanao politika samy hafa firehana saingy mivondrona ho amin’ny fikambanana iray. “Tsy misy fandrosoana raha tsy mivondrona sy manambatra hery ny rehetra. Izay no imasoan’ny Mafami”, hoy ny filoha nasionalin’ny Mafami, Rasolomampionona Hasimpirenena, tamin’ny kabary fanokafana ity fihaonambe voalohan’ny fikambanana ity, ny asabotsy teo. Maro ny vina napetraka hotratrarina mba ho fandraisana anjara amin’ny fampandrosoana ny firenena, araka ny nambarany ihany. Avara-pianarana avokoa ny mpikambana rehetra ka tsy ho sarotra ny manao izany.
Tsy manana loko politika
Tsy manana loko politika na tohanana mpanao politika ny Mafami fa ireo mpianatra avy eny amin’ny ambaratonga ambony sy ireo maintimolaly no mampihodina azy. Raha tsiahivina, efa 30 taona mahery ny nijoroan’ny fikambanana ary maro ny olona ambony eto amin’ny firenena no mpikambana ao: mpandraharaha, tomponandraikitra ambony amin’ny sehatra iadidiany avy, mpanao politika isan-karazany… Araka izany, sehatra iray ifampitaizan’ny mpikambana sy ifanampiana eo amin’ny fianarana sy asa aman-draharaha izy ity. Raha nandaha-teny ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotomanana Honoré, tonga nanotrona ity fotoan-dehibe ity, nanambara fa mendri-piderana ny fikambanana toy izao amin’ny ezakana ataony amin’ny fampihavanana sy fampivondronana ny herivelona rehetra hisian’ny fampandrosoana ny firenena.